ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးတာရှည်ခံလား? - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးတာရှည်ခံလား?
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-19 မူလ:ဆိုက်ကို
သင်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်လိုလျှင်ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုး သင်သည်သင်၏နေအိမ်အလှဆင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကအရမ်းရှည်ခံသောကွောငျ့, ထို့နောက်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု, မှန်ကန်သောဖြစ်ပါသည်, သင်မကြာခဏပြုလုပ်ပြုပြင်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါလျှင်ပင်, သင်သာအခြေခံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ယနေ့ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးသစ်သားငါးဆဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ ဒါဟာဆန့်သို့မဟုတ်ခွဲမခွာဖို့ခက်ပါတယ်။ ဗီနိုင်းသစ်သားထက်လေးဆပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ အဆိုပါဗီနိုင်းပူရရှိသွားတဲ့အထိအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့, အကြောင်း, အကောင်းတစ်ဦးအရာပါပဲ။ အပူလွန်ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးဆန့်နှင့်သင်၏ရေးသားချက်များနှင့်ပြားခြားနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတိထားမဟုတ်လျှင်ယင်း၏ကွင်းခတ်ထဲက pop နိုင်ပါတယ်။ အအေးဆောင်းလကာလအတွင်းဗီနိုင်းကြွပ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ကျိုးဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့နိုင်ပါတယ်။ တိုက်တေနီယမ်အောက်ဆိုဒ်အဖြူဖြစ်တယ်, ဒါဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးအစဉ်အလာ Light-အရောင်ခဲ့ကြပြီ။ မှောင်သောအရောင်အဆင်းနိုင်အောင်မှောင်မိုက်-ရောင်စုံဗီနိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်န့အပူကိုင်ထားပါ။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တိုးတက်မှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှထုတ်လုပ်သူဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးအရောင်များကိုတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ရွေးချယ်ရေးများကိုစတင်အဘို့လုပ်နေပါတယ်။
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး ထုတ်ကုန်သင်ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းများ အသုံးပြု. ကိုရှောင်ရှားသင့်ကြောင်းပလပ်စတစ်များထဲမှအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူ PVC အဆိုပါ extrusion လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမြားကိုပွငျဆငျပြန်လည်လျှင်တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်အသုံးပြုပလတ်စတစ်ဟာ PVC အရောအနှောသို့လည်းအများအပြား variable တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပြီးတာရှည်ခံမဟုတျကွောငျးထုတ်ကုန်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးမှာ, ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးပစ္စည်းများကိုချိုးဖျက်ဖို့ခက်ခဲသည်။ သငျသညျသည်မုန်တိုင်းဒဏ်အဆိုးဝါးဆုံးခံခဲ့ရသောနေတယ်ဆိုရင်, ဆိုဗီနိုင်းချိုးမည်, ဒီတော့သင်ကယာဉ်ရပ်နားဧရိယာအနီးရှိခြံစည်းရိုး၏ဤအမျိုးအစားမတပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအနီးတွင်ပေါင်းပင်အစားအသောက်နှင့်အတူမြက်ချုံ့ခြင်းသောအခါအစောင့်ရှောက်မှုယူရမည်ဖြစ်သည်။ မြင်းအလျားလိုက်ခြံစည်းရိုးပေါ်ဝါးနဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပေမယ့်ဗီနိုင်းပစ္စည်းများ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဘို့ကောင်းသောမရှိကြပေ။ တချို့ကမြင်းပိုင်ရှင်များခြံစည်းရိုးဆန့်ကျင်ပွတ်နယ်ကနေသူတို့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်များမှကာကွယ်ရန်ထိပ်ရထားလမ်းတလျှောက်တွင်လျှပ်စစ်ခြံစည်းရိုးတစ်စီးရီး running အားဖြင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်း။
စတိုင်များ, အရွယ်အစားနှင့်အရောင်ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထဲမှာသီးသန့်တည်ရှိမှု, ရေကူးကန်နှင့် picket ခြံစည်းရိုးကနေမြင်းခြံစည်းရိုးများနှင့်လက်ရန်းစနစ်များအထိဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးထုတ်ကုန်များ၏ပြည့်စုံ line ကနေရွေးချယ်ပါ။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, သင်ခြံစည်းရိုးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုစိတ်ကြိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဖြည့်စွက်အပေါငျးတို့သကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးထုတ်ကုန်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းထက် 20-50% ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြရရှိနိုင်အများဆုံးအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများကိုအတူ 100% ကညာဗီနိုင်းကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါဟာရေနှင့်စိုထိုင်းဆမှ impervious င်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အကောင်းဆုံးခရမ်းလွန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝနီးပါးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ chip ကို, ပုပ်သို့မဟုတ်အက်ကွဲမယ့်။
ဗီနိုင်းပထမဦးဆုံး 1980 မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်, ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး, ရှည်သစ်သားထက်ကြာရှည်နည်းနည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်, ထင်းရန်သူများကို (ခွတှစေား, မှို, အခြောက် rots နှငျ့မီး) ကဖျက်ဆီးပစ်ကြသည်မဟုတ်။
အကြမ်းခံဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးဓားရေးပြိုင်ပွဲ ဗီနိုင်းပုဂ္ဂလိကခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းပုဂ္ဂလိကဓားရေးပြိုင်ပွဲ